Efa nigadra valo volana io tovolahin’Anosipatrana io ary voasambotry ny polisy avy ao Ilanivato ny faran’ny volana jolay teo rehefa avy namaky tranon’olona ka nibata ny vata fahitalavitra. Mpiara-monina aminy teo Anosipatrana ihany ilay lasibatra. Tamin’ny 12 ora atoandro, hitany nivoaka ny tompon-trano ka nobatainy ny vata fahitalavitra. Nafeniny tao an-tranony izany. Nisy nahatsikaritra ka rehefa niverina ny tompon-trano tamin’ny 1 ora tolakandro ka nahita ny vaky trano dia niantso polisy. Nivantana tao an-tranon’ilay tovolahy ny mpitandro filaminana ka tratra tao ilay vata fahitalavitra.
Teny an-dalana hatao fanadihadiana no tafaporitsaka ilay tovolahy ary nokarohina. Nahazo vaovao ny polisy fa eny Anosibe no miafina izy, ka ny zoma 23 aogositra 2019 teo no voasambotra. Nanondro ny mpiray tsikombakomba aminy tamin’ny fanafenana ireo entana halatra ary koa ny mpimasy izay lazainy fa mpanome fanafody azy izy, ka olona telo hafa ihany koa no voasambotra taorian’ny famotorana ary anisan’izany ny renin’ity tovolahy ity. Efa natolotra ny fampanoavana izy efatra ireto ny alatsinainy teo. Efa nifonja nandritra ny 8 volana izy noho ny antony fanendahana ary nivoaka ny fonja ny volana desambra 2018.